११ शव्द प्रेरक पानी बोतलहरू अब किनमेल गर्न - कल्याण
११ प्रेरित पानी बोतलहरू वास्तवमा तपाईंलाई हाइड्रेट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ
11 Motivational Water Bottles That Might Actually Encourage You Hydrate
आज तपाईंसँग कति पानी छ? यदि तपाईं सबै अमेरिकीहरूको आधा जस्तो हुनुहुन्छ भने, तब पर्याप्त छैन - कम्तिमा अनुसार CDC । हामी सबै अपराधी कार्य दिन मा वा पछि जाम प्याक सप्ताहन्तमा पनी until बजे सम्म H2O को एक sip नलिनका लागि कसूर दोषी छौं (ती सम्झना छ?)। तर प्रेरणादायक पानीको बोतलहरूको हाम्रो भर्खरको अन्वेषण कुल खेल परिवर्तनकर्ता भएको छ जब यो अन्त-दिनको पार्क गरिएको भावनालाई बेवास्ता गर्न आउँछ।
यस नयाँ प्रकारको पानीको बोतल तपाईको प्रिय हाइड्रोफ्लास्क (वा कुनै अन्य अमेजन फेला परेको) जस्तै छ तर यो मार्क र भनाइहरूले तपाईंलाई दिनको समयमा पानीको सेवन गर्न मद्दत गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। तपाईंको पानीको बोतलमा बस्ने तपाईंको आफ्नै hype man भएको कल्पना गर्नुहोस् र जसको एकमात्र काम भनेको तपाईं सही हाइड्रेटेड हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्नु हो। त्यो, मेरा साथीहरू, एक प्रेरणादायक पानीको बोतल हो!
हामीले यी प्रोत्साहनजनक पिउने भाँडालाई भाइरल ट्रेंडको रूपमा पहिलो पटक देख्यौं टिक टक र त्यसपछि इन्स्टाग्राम, प्रभावकार र लेखक डानिएल प्रेसकोडलाई उत्तर धन्यवाद जुन उनले भनिन्छ के गठन गर्छिन् पानी पंथ । त्यसोभए, के तपाईं हाइड्रेटेड भएको फाइदा काट्न तयार हुनुहुन्छ? यहाँ, ११ प्रेरणादायक पानीका बोतलहरू जुन तपाईंलाई केही गम्भीर पिउनको लागि तयार हुनुपर्दछ।
ब्रुस विलिस नयाँ फिल्म
सम्बन्धित: यदि तपाईले एक दिन एक ग्यालन पानी पिउनु भयो भने के हुन्छ?7बाहिर खोज्नु पर्ने कुराहरु
१ Sankuu १ गैलन पानी बोतल
एक गैलन तरल पदार्थ पक्रेर, यो बोतल डरको लागि होईन। धेरै समीक्षकहरू भन्छन कि उनीहरूले कत्ति ठूलो ग्यालन वास्तवमै कत्तिको महत्त्व छ भनेर सोच्छन तर पिउनको लागि लगातार रिमाइन्डर मनपराउँदछन्। यो बोतल भारी भरिन्छ जब काण्डमा भरिन्छ, त्यसैले — बोनस! Drinkतपाईंले जस्तो पिउनुहुन्छ तपाईले आर्म कसरत पाउनु हुनेछ। कमसेकम यो बिहान हुन्छ, जब सम्म तपाईले आफ्नो दैनिक खपतमा दन्ते बनाउनु हुँदैन।
$ १ Amazon अमेजनमा
२ अनकमोन अधिक पानी बोतल पिउनुहोस्
एक गैलन बोतलको विपरीत स्पेक्ट्रममा, हामीसँग १-औंस गिलास विकल्प छ। यस नम्बरको रमाइलो ग्राफिक्सले तपाईंलाई चुग गर्न चाहेको बनाउँदछ, त्यसैले तपाईंसँग यो स्टाइलिश डिजाइन हेर्न प्रशंसा गर्ने थप बहानाहरू छन्। धेरै समीक्षकहरू उल्लेख गर्छन् कि यो बोतलले ठूलो उपहार दिन्छ, चाहे तपाईं दिँदै हुनुहुन्छ वा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।
Ad. एडोल्फ ठूलो आधा गैलन प्रेरक पानी बोतल
यदि गोल्डी लोक्सका तीन भालुहरू पानीको बोतलहरू हुन् भने, यो मामा भालु हुनेछ। एक-गैलन र -२-औन्स बीचको भित्र पस्दै, यो मध्यम आकारको बोतल हो जुन यत्ति भारी हुँदैन यदि तपाईं घर छोड्नुपर्दछ भने वरिपरि बोक्न सकिंदैन। तपाईंलाई प्रत्येक दुई घण्टाको साथ पिउन सम्झाइनेछ पन्नी भनाइ सहित, चगिंग राख्नुहोस् र हार नमान्नुहोस्। द्रुत र सजिलो फ्लिप स्ट्र स्ट्र र ह्यान्डलको साथ हामी यो लाग्छौं कि यो तपाईंको अर्को जिम यात्राको लागि उत्तम बोतल हो।
$ २१ अमेजनमा
Op. ओपार्ड oz२२ स्पोर्ट पानी बोतल फिल्टर सहित
धेरै मानिसहरूले केवल स्वादयुक्त पानीको चुस्काउनेछन् र यदि तपाईं ती व्यक्तिहरूमध्ये हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि प्रेरक पानीको बोतल हो। फल इन्फ्युसर र फ्लिप ढक्कनले निर्मित, यो बोतलले तपाईंलाई सादा पुरानो पानीमा तपाईंको आफ्नै स्पर्श थप्न दिनेछ। धेरै समीक्षकहरू भन्छन् कि बरु उदारताका आकारको इनफ्यूजर सफा गर्न र हटाउन अत्यन्तै सजिलो छ, विशेष गरी ती दिनहरूमा जब तपाईं सादा पुरानो पानी चाहानुहुन्छ।
B. बोतलबन्द आनन्द स्टेनलेस स्टीक पानी बोतल
वा, हुनसक्छ कि तपाईं त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ जुन केवल बरफ चिसो पानी मात्र पिउन सक्छ। यो स्टेनलेस स्टील शैली एक डबल भित्ता भ्याकुम संग सुसज्जित छ, जो तपाइँको छनौट को पेय चिसो (वा तातो) मा 12 घण्टा सम्म राख्नेछ। यो आइस क्युब्स जहाँ राख्छन् राख्नका लागि चार पुन: प्रयोज्य आइस क्युब्स र मेटल स्ट्र्रेनरको साथ आउँदछ (अर्थात्, पानीमा)। जब तपाईं यो विशेष डिजाइनको साथ दिनभरि कति मात्रामा पानी खपत गर्नुभयो भनेर ठ्याक्कै तपाईं सक्षम हुनुहुने छैन, समीक्षकहरूले नोट गरे कि यो उत्प्रेरणामूलक हुनेछ।
$ १२ अमेजनमा
Amit.अमिटर ग्यालन प्रेरक पानीको बोतल
यदि तपाईं एक VSCO केटी हुनुहुन्छ भने तपाईंको बन्डेड-अप हाइड्रोफ्लास्क अपडेट गर्न खोजीरहेको छ भने, अब नहेर्नुहोस्। १२8 औंसमा क्लक गर्दै, यो बोतल एक दिनको पानीको मूल्य राख्नको लागि ठुलो छ ... र त्यसपछि केही। डिजाइनको ढाँचा र scheme्ग योजना र ब्रेडेड स्ट्र्यापले तपाईंलाई दिनको ग्रीष्म शिविर फ्ल्यासब्याक्स पनि दिनेछ जब तपाईं र तपाईंको सालाका साथीहरूले तपाईंको टि शर्ट टाई र मैत्री ब्रेसलेटको आदान प्रदान गर्नुहुनेछ।
$ २० अमेजनमा
सबै समयको सबैभन्दा रोमान्टिक चलचित्रहरू
LE. LEADO 32oz Motivational Tracking पानी बोतल
हो, यो हामीले भेट्टाउन सक्ने सबैभन्दा मनमोहक प्रेरक पानीको बोतल हो। तपाईं मध्ये जो शब्द खेल र मनमोहक फ्याक्स छवि मनपराउन को लागी, तपाईं को लागी प्रत्येक को लागी यस बारे मा गर्व छ। -२-औन्समा आउँदैछ, यो बोतल मध्यम आकारको कोटीमा फिट हुन्छ, तर बीपीए-फ्रि प्लास्टिकले यसलाई हल्का र सजिलो यात्रा साथी बनाउँछ। स्यालहरू तपाईको चीज होइनन्? यो लामा, जिराफ, उल्लू, गाई वा फ्लेमिing्गो संस्करणको रूपमा पनि आउँदछ।
B. बोतल बोतल स्ट्रफ र मोटिभेशियल समय मार्करको साथ आधा गैलन पानीको बोतल
Ding! तपाईको पुरानो धातुको पानीको बोतल तपाईले यसलाई किन्नु भएको तीन दिन पछि नै आवाज मिल्छ। यदि तपाईं अब क्षतिग्रस्त पोत बदल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो पेस्टल डिजाइन विचार गर्न सक्नुहुन्छ। चुहावट प्रूफ-64-औंस बोतलको तल सिलिकॉन बुट छ, जसले कुनै हानिकारक इन्डेन्ट्स वा डिंगि .हरू गर्नबाट रोक्दछ। एक समीक्षक लेख्छन्, म दिनको दुई पानि पिइरहेको छु! र बैजनी रंग सिलिकॉन तलको साथ ठूलो छ। सबै चारै तिर यो प्रेम!
El। एल्वीरा oz२ ओटो प्रेरणादायक स्वास्थ्य खेल पानी की बोतल
बीपीए-रहित र सजिलैसँग खुला ट्याबको साथ बनाईएको, यो एल्भिरा बोतल उनीहरूको लागि उत्तम छ जो एक हल्का र सानो आकारको बोतल चाहान्छन् जुन तपाईंलाई AM बिहान PM देखि अपराह्न PM बजेसम्म प्रेरणा दिन्छ र पिउँछ। थप रूपमा, बोतल हटाउन योग्य फिल्टरको साथ आउँदछ, जुन धेरै समीक्षकहरूले टिप्पणी गर्छन् उनीहरूको पानीमा चिया वा फल निषेधको लागि उत्कृष्ट छ। यो बोतल निश्चित रूप मा तपाइँको निम्बू पानी खेल बढाउन सक्छ!
१०. मन्त्रमार्ट मेनिफेस्ट वाटर बोतल
एक सुन्दर बीपीए फ्रि प्लास्टिक सेट गर्नुहोस्, जुन लगभग गिलास जस्तो देखिन्छ, यस बोतलको प्रेरणादायक उद्धरणहरू केवल अधिक H2O पिउन प्रति तैयार छैनन्, तर तपाईंको दैनिक जीवनको लागि सकारात्मक affirmations समावेश गर्दछ जस्तै, म मेरो सपनाको नजिकै छु।
फल चार्टमा प्रोटीन
११. खुशीको गिलास पानीको बोतल
फूल, जनावर र साना कुटेजहरूको यी रंगीन छविहरूले तपाईंलाई आनन्द र हाइड्रेसनको कल्पना भूमिमा पुर्‍याउँछ। साथै, यो बोतल तपाईंको सूचीमा अरूको तुलनामा स्लिमर छ, तपाईंको दैनिक सेवनको वरिपरि सजिलो पकडको लागि अनुमति दिदै।
सम्बन्धित: के तपाई वास्तवमै एक दिनमा १०,००० कदम हिड्नु पर्छ (जस्तै, * वास्तवमै *)?
बच्चाहरूको लागि औंला फूडहरू
कद्दू फल वा तरकारी
कालो जीरा बीज कपाल को लागी
कपालको विकासका लागि कति बदाम खानुपर्दछ
कसरी पेट व्यायाम कम गर्न
कसरी मेरो कपाल विकास सुधार गर्न
केटा लागि पौंडी पोखरी खेल